October | 2019 | | Yangon Thu Michelle
ရန်ကုန်သူမီရှဲ လိုက်မေးမြန်းဖြစ်တဲ့ လူငယ်တွေရဲ့ အနာဂတ် အနာဂတ်မှာ သင်ယူလေ့လာဖို့အခွင့်အရေးတွေ ပိုရလာမယ်လို့ ထင်လား? (Unicode) အနာဂတ်မှာ သင်ယူလေ့လာဖို့အခွင့်အရေးတွေ ပိုရလာမယ်လို့ ထင်လား?ဒီဗွီဒီယိုမှာ Yangon Thu Michelle – ရန္ကုန္သူမီ႐ွဲ… Read More
စွန့်စားမယ် အချစ်ရေ လိုက်ရဲလား #yangonthumichelle #michellemayshell #lifestyleblogger #cappadocia #balloonview Read More
မီရှဲက ဆံပင်ရှည်တော့ ခေါင်းလျှော်ရည် ခဏခဏကုန်တယ်လေ။ အဲ့ဒါနဲ့ ပြီးခဲ့တဲ့ နှစ်ရက်က ခေါင်းလျှော်ရည် သွားဝယ်တော့ သုံးနေကြ Dove က ကံစမ်းမဲပါတဲ့စတေကာနဲ့ ဘူးလေးတွေတွေ့လို့ဝယ်လာသေးတယ်။ ဘူးပေါ်မှာတော့ သြဂုတ်လကုန်ထိပဲလို့ရေးထားလို့ လန့်သွားတာ. Dove… Read More